Isixhobo seKharityhulamu yesiXhobo esivela kuBuninzi boBuninzi
UkuBaluleka koLuntu: Izixhobo zokuNyusa uKhuphelo loMxholo
NgoMgqibelo, Agasti 4, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Abanye benu banokubuza ukuba uthini umbandela. Kukho umthamo ohlekisayo womxholo opapashwa kwiwebhu nge-Twitter, kuFacebook, kwiibhloko, kwiindaba, kwiYouTube nakwezinye iindlela zonxibelelwano. Amathuba kukuba omnye womxholo ubalulekile kubaphulaphuli bakho-kodwa ufuna enye ukuhlalutya, ukuhluza kunye nokubonisa ngendlela eluncedo. Vula Martech Zone, silungisa umxholo omninzi. Omnye umzekelo yi-infographics. Ngelixa sifumana itoni yazo, siyakulumkela ukuphonononga, ukuhluza, ukuhlalutya kunye nokuchaza ukuba kutheni zisebenza kubaphulaphuli bethu kwaye nokuba loluphi uluvo lwethu.
Umxholo weKharityhulamu unokunceda kakhulu kwiimpawu zakho zoguquguquko kunye nendawo. Khawufane ucinge ukuba ungongeza ukondla okubukhoma kwezimvo zentlalo, uphononongo kunye neetweets kwiphepha lakho lasekhaya kubathengi abonwabileyo ngexesha langempela. Owona mxholo ubalulekileyo… kwaye mhlawumbi unefuthe elingaphezulu kwebhloko yobungqina obuqhelekileyo okanye ilogo yomthengi. Oku kufuna izixhobo zokudala umxholo.
Isenzo sokukhuphela umxholo sisixhobo kakhulu. Kanye ngaphakathi eofisini yethu, sonke sifunda imithombo eliqela mihla le, sinoliso ekuhlaleni lokutyhala ulwazi kuthi malunga nabaxhasi bethu kunye nabo sikhuphisana nabo, kunye nezazisi zikaGoogle zokubeka esweni amanqaku amatsha ngewebhu. Sisebenza nzima ukubilisa yonke le mithombo kwezinye iziqwengana ezifutshane zolwazi esinokuzithumela kubaxumi bethu ukuze bahlale benolwazi ngezinto. Ifuna ukudityaniswa kobukrelekrele, amava kunye netekhnoloji ukuze yenziwe kakuhle… kwaye yinkqubo ehambayo eqhubeka itshintsha.
Umzekelo omkhulu wokuhanjiswa komxholo yindlela umabonwakude apapasha ngayo uhlaziyo lwe-twitter olunokuthi luthandwe kubaphulaphuli babo. Inkqubo ayilulanga- ii-tweets kufuneka zingqinelane, zingakhuseleki kwaye zizonwabise.
UkuBaluleka koLuntu liqonga elisekwe kwilifu elivumela abathengisi kunye nemithombo yeendaba ukuba baphathe umxholo omkhulu kwaye bayinyuse kubaphulaphuli babo. Iqonga lokuBaluleka kweMisa likhupha umxholo ofanelekileyo kwi-Twitter nakwezinye iinethiwekhi zentlalo, zihluza iincoko ezikhutshiweyo kwimithetho echaziweyo yomsebenzisi, kwaye zenze ukubonwa kwabathengisi ukuba bangene kwiwebhusayithi, kwaye zibandakanye kwii -apps zeselfowuni, bonisa kwizikrini zeTV, uncamathisele kwiindawo zokugcina , okanye wenze enye into.
UkuBaluleka koLuntu unikezela umthengisi uthotho lwezixhobo ezakhelweyo okanye iimodyuli, ezisebenza ngokuzimela kunye nomsebenzisi ozinikeleyo, okanye njengenxalenye yeqonga elikhulu elidibanisa iimodyuli ezimbini okanye nangaphezulu.
Izixhobo okanye iimodyuli ekunikezelweni zibandakanya:
Iimveliso zeAmplification ezinje nge Imilinganiselo yoLuntu ukufaka amanqaku eenkwenkwezi athunyelweyo kunye Amagqabantshintshi ukubamba ukwabelana ngokwasentlalweni.
Iimveliso zokuzibandakanya ezifana Iindlela zoLuntu ezibonisa izinto ezenzekayo kwintlalo, Imijelo yeMisa ezigcina incoko zentlalo kwaye ukhethe umboniso olungileyo, Igalari yobuninzi evelisa udonga lomfanekiso olunxibelelanayo kunye nemifanekiso evela kwimithombo eyahlukeneyo yentlalo, IMass Leaderboard ebonelela ngenqanaba lentlalontle kunye nokukhuthaza uninzi lwabaphulaphuli, IiMephu zoLuntu ebonisa umxholo wentlalo ngokweendawo, Izixhobo zokuBala ekhanyisa umthamo wezinto zentlalo ezenzekayo.
Iimveliso zonxibelelwano ezinje nge Iimpendulo zaMisa ezivumela abathengisi ukuba bathumele ngqo kubaphulaphuli kunye nolawulo lwempendulo yemisinga kunye IiPoll evumela ukuvota eluntwini.
UkuBaluleka koLuntu inikeza ezi zisombululo zilungele ukudibanisa esinye okanye ezingaphezulu kwezi zixhobo zilapha ngasentla:
Umhlobo edibanisa umxholo onamandla kuyo yonke imidiya yoluntu.
Ukuqhuba edibanisa umxholo wentlalo ngesihloko okanye kwimveliso.
Umhlambi-Ukuvula ukubonelela ngesiqulatho esisodwa esifikelelekayo ngokuthatha inxaxheba koluntu
Zeitgeist ideshibhodi ebekiweyo eyahlukeneyo ebonelela ngesixa sayo yonke imisebenzi yezentlalo ngendlela ecwangcisiweyo nekulula ukuyilawula
usebenzisa UkuBaluleka koLuntu, Abathengisi banokulawula okanye balungelelanise yonke into eyenzekayo enxulumene nebrand kwindawo yemidiya yoluntu. Izibonelelo zokudityaniswa ezidluliselwe kubathengi kunye nethemba lokuphucula amava abo kunye nokubonelela ngendawo yokuzibandakanya okungcono.
tags: umxholo wekharityhulami-curationukufaneleka kobunzimaUkukhethwa kwe-twitter
Utshintshiselwano ngeNtengiso yoBume: Pitch, Khangela, Phumeza
Iimpazamo lutshaba lwakho lwe-SEO